युरोपियन फुबटल क्लबको शेयर लगातार ओरालो - firewordsdaily
युरोपियन फुबटल क्लबको शेयर लगातार ओरालो
फाएर वोड्स मेडिया प्रा.लि.
काठमाडौं– नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीको मारमा युरोपका व्यवसायिक फुटबल क्लबहरु पनि परेका छन् । जसरी विश्व अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले भयभित बनाएको छ त्यसैगरि युरोपका महारथी क्लबहरुलाई पनि आर्थिक नोक्सानीको पीडा खेप्न बाध्य पारेको छ ।
यसको सबैभन्दा ठूलो घाटा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडलाई भएको छ । रियलमा अस्वभाविक रुपमा आर्थिक
समस्यामा फस्दै गएको छ । यता स्पेनकै बार्सिलोना र एट्लेटिको मड्रिडले भने खेलाडी तथा क्लबका कर्मचारीहरुको तलब कटाएर भए पनि आर्थिक जोहोमा जुटेको बताइन्छ ।
कोरोनाकै कारण युरोपका अन्य बलिया क्लबहरुको शेयरमा पनि गिरावट आउन थालेको छ । इटलीको जायन्ट युभेन्ट्सको शेयरमा पनि गिरावट आउन थालेको छ । पछिल्लो एक महिनामा युभेन्ट्सको शेयर २१.१६ प्रतिशतले घटेको छ । यसको कारण शेयर पिर्ता लिनु रहेको जनाइएको छ ।
युभेन्ट्सका खेलाडीहरुले ४ महिनाको तलब नलिने समहति जनाइसकेका छन् । जसअनुसार खेलाडीहरु जुलाईसम्म कुनै पनि महिनाको तलब पाउने छैनन् । तलबमार्फत् क्लबले ९० मिलियन युरो बचत गर्नेछ ।
तलब काट्नु अगाडि मार्च १२ मा युभेन्ट्सको शेयरको मूल्य ०.५४ थियो भने अहिले खेलाडीको तलब कटौती गरेपछि त्यो बढेर ०.७७ मा पुगेको छ । यसको अवस्था २०१८ मा रियल मड्रिडबाट क्रिष्टियानो रोनाल्डोलाई क्लबमा आवद्ध गर्दा दोब्बर भएको थियो ।
सिरी ए को अर्को क्लब रोमालाई पनि शेयर बजारले घाटा लगाएको छ । कोरोनाले असर गरेपछि रोमालाई डान प्रेन्डकिनले किन्न तयार भएका थिए । रोमाको शेयरमा नाटकीय गिरावट आउँदा क्लब संकटमा परेको हो ।
यता, प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडको शेयरमा ११.०६ प्रतिशतले गिरावट छ । तर, त्यो २०२० को शुरुवातमा आएको जति गिरावट भने होइन् । यअघि युनाइटेडको शेयरमा २०.२१ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो ।
यता, जर्मन क्लब बोरुसिया डटमन्डलाई अघिल्लै महिना शेयर बजारमा ठूलो चोट पुगिसकेको छ । त्यतिबेला उसको शेयर ३६.७६ प्रतिशतले ओरालो लागेको थियो । यसले जर्मनका अन्य क्लबहरुको शेयरमा पनि असर पर्न सक्ने आँकलन भइरहेका छन् । यस्तैमा जारी सिजनको च्याम्पियन्स लिग शुचारु नभए डर्टमन्ड झनै ठूलो आर्थिक संकटमा पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
त्यसोत जर्मनका क्लबहरुमा एउटा छुट्टै संस्कार पनि छ । यसअघि २००३ मा डर्टमन्ड व्यापारबाट कमजोर हुँदा उसलाई बार्यन म्युनिखले विना ब्याज ९ महिनाका लागि २ मिलियन युरो ऋण सहयो गरेको थियो । त्यतिबेला डर्टमन्डलाई जोगाउन म्युनिखले गरेको ऋण सहयोग बरदान सावित भएको थियो ।
उक्त ब्याज दिँएपछि बार्यनले भनेको थियो, ‘जहाँ बलियो प्रतीद्वन्द्वी छैन त्यहाँ व्यापारमा मजा आउँदैन ।’
डा. के. सीको समर्थनमा प्रदर्शन र प्रहरी प्रशासनको दमन
३ हप्ता पहिले
ग्लोबल कलेज डिबेट क्लबले "डेयर टू स्पिक 2.0" आयोजना गर्दै
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'ग्राउन्ड ह्‍यान्डलिङ' नेपाल एयरलाइन्सले गर्ने
स्कुटीमा सवार कांग्रेस सांसद प्रकाश स्नेहीलाई माइक्रोले दियो ठक्कर
ओली प्रचण्ड छलफल: केही मन्त्री फेर्ने की पुनर्गठन गर्ने भन्ने अन्योल
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन: मन्त्रालय फुटाउने तयारी
“जेभियर इन्टरनेशनल कलेज एसियन स्पिच कम्पीटीसन हालैमात्र सम्पन्न”
जेभियरले आयोजना गरेको मोडल युनाइटेड नेशसन कार्यक्रम सम्पन्न
सरिता गिरीको सांसद पद निलम्वन , पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने
१ मिनेटमा प्रधानमन्त्रीलाई गगन थापाको ९ प्रश्न
बलिउड गायक जुबिनको गीत निर्देशक मुकुन्द भट्टले निर्देशन गर्ने, फजिलले अभिनय गर्दै
कैलालीमा एक साथै तीन वालिका बलात्कृतः चार पक्राउ, एक फरार
पुरानो बानेश्वोर काठमाडौँ नेपाल
पोष्ट बक्स नंः १०५२८
कार्यालय -९७७ ९८४८१८३४०
टेलिफोन कार्यालय -९७७ ९८४८१८३४०
© Firewords Media Pvt Ltd सर्वाधिकार सुरक्षित Powered by: Grafias Technology